Tag: roas | Martech Zone
Igwe ojii MOLOCO bụ igwe eji akpaghị aka na-azụ ahịa maka ngwa ahịa mgbasa ozi gafere usoro mmemme mmekọrịta ụwa na ntanetị mgbasa ozi ngwa. Ugbu a dị ka igwe ojii maka ikpo okwu maka ndị ahịa na ngwa ahịa niile, MOLOCO Cloud na-arụ ọrụ site na teknụzụ na-ahụ maka igwe na-enye ndị na-ere ahịa ekwentị ohere iji nweta data nke mbụ na akara ngosi site na gburugburu usoro mmemme iji mepụta mgbasa ozi mgbasa ozi na-akpaghị aka. arụmọrụ arụmọrụ. MOLOCO Cloudgwé ojii gụnyere Gbanwee - rute mkpanaka
Mmetụta Radius: Onye Mmekọ, Mgbakwunye, Media na Tag Management
Radius Mmetụta na-enyere ụdị ụlọ ọrụ dijitalụ na ụlọ ọrụ aka iwetaghachi nloghachi nke mgbasa ozi etinyegoro na ntanetị dijitalụ, mkpanaka na nke anọghị n'ịntanetị. Teknụzụ SaaS ha na-enyere ndị na-ere ahịa aka inwe nyocha dị iche iche na mbọ niile a na-agba site na ịnakọta data njem ndị ahịa na ahịa na ahịa ha. Suite Radius Radius nke Ngwaahịa gụnyere Onye Mmekọ Njikwa - mezie njikọ gị na mmemme mmemme ibe gị. Belata ụgwọ azụmahịa gị ma bulie ROI ka ị na - eme ka scalability, nghọta nyocha, na